Kuyini floor of cork futhi kunezinhlobo eziningana? - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Kuyini floor of cork futhi kunezinhlobo eziningana?
Ukubeka phansi ukhokho:
I-Cork ungqimba oluvikelayo lwe-oak yaseChinese, okungukuthi, amagxolo, aziwa ngokuthi yi-oak cork. Ubukhulu bekakhokho ngokujwayelekile bungu-4,5 mm, kanti ukhokho osezingeni eliphakeme ungafinyelela ku-8.9 mm. Uma kuqhathaniswa nokhuni oluqinile phansi, ukufakwa phansi kwekhokho kunhle kakhulu ekusebenzeni kwemvelo nasekuphikeni komswakama.
Kunezinhlobo ezintathu eziyinhloko zokufuthwa kukakhokho phansi:
Floor Iphansi likakhokho ohlanzekile. Ubukhulu bungama-4 noma ama-5mm. Kunzima kakhulu futhi kuyindala ngokwemibala, futhi ayikho iphethini ehleliwe. Isici salo esikhulu ukuthi senziwe ngokhuni olumsulwa olulula, futhi ukufakwa kwalo kunamathiselwe, okungukuthi, kunamathele ngqo emhlabathini ngeglue ekhethekile. Inqubo yokwakha iyinkimbinkimbi kakhulu futhi nokugcwala komhlaba kuphakeme kakhulu.
② Cork buthule phansi. Inhlanganisela ye-cork kanye ne-laminate flooring .. Inezela ungqimba lwe-cork cishe ngo-2 mm phansi kwesisekelo se-laminate ejwayelekile, futhi ubukhulu bawo bungafinyelela ku-13.4 mm. Lapho umuntu ehamba ngaphezulu, ukhokho ongezansi ungabamba ingxenye yomsindo futhi ubambe iqhaza ekunciphiseni umsindo.
③ phansi Cork. Kubonwa kusuka engxenyeni yesiphambano, kunezendlalelo ezintathu.Ungqimba olungaphezulu kanye nolwelwesi olungaphansi lwenziwe ngohlobo lwekhokho yemvelo .. Ungqimba oluphakathi luboshwe ngebhodi le-HDF ngesihluthulelo.Ukuqina kungafinyelela ku-11.8 mm. Ukusebenza kuhambisana nebhodi le-HDF, elikhulisa kakhulu ukuqina kwalolu phansi. Izendlalelo zekhokho zangaphakathi nezangaphandle zingafeza umphumela omuhle wesimungulu. I-cork engaphezulu ibuye ihlanganiswe ngopende okhethekile osezingeni eliphakeme, ongagcini ngokubonisa ukuthungwa kokhokho, kodwa futhi udlala indima enhle yokuvikela. Ngasikhathi sinye, lolu hlobo phansi lusebenzisa ubuchwepheshe bokukhiya, obuqinisekisa ngokuphelele ukuqina nobushelelezi bokuphamba kwephansi. Kungalandela ngqo indlela yokumisa.
Kuyini floor of cork futhi kunezinhlobo eziningana? Okuqukethwe okuhlobene